Dagaal Xoog leh oo mar kale Saaka dib uga qarxay Maqaayadii Xalay la weeraray – Hornafrik Media Network
Daryanka Rasaasta, Qaraxyadda ayeey mar kale saaka iskula waabariisteen Ciidanka Ammaanka iyo Kooxdii Xalay weerartay Maqaayadda Pizza House ee Degmadda Hodan. Waxaana dhismaha Maqaayadda is qabsaday Qaraxyo u muuqda Bam Gacmeedyo ay isticmaalayaan Kooxdii Maqaayadda soo weerartay.
sida muuqata way ka badan yihiin inta ka nool Kooxdii Weerarka gaystay 1 Nin sida horay ay u shaaciyeen Saraakiisha Ammaanka. Waxaana Qaraxyadda Rasaasta laga maqlayaa Aagga Maqaayadda ay ku taalo oo Caawa aan laga seexan, cabsi iyo qal qal ka jira.
Saraakiisha Ammaanka oo hadda la hadlay Hornafrik waxay u sheegeen in Hawlgalkii Rasmiga ahaa ee soo Afjaridda Weerarka Argagixisanimo uu hadda billowday, wixii hadda ka horeeyayna ay Goobta uun ku go’doominayeen Kooxda Weerarka gaystay si aysan u baxsan. Waxaana hadda gudaha u galay Dhismaha Maqaayadda Ciidamo hor leh oo Gaashaan ka tirsan.
Maydad fara badan ayaa gudaha iyo Banaanka dhismaha daadsan, iyadoona Maamulka Degmadda ay wadaan Gurmad ay ku daabulayaan Dhaawacyadda iyo Maydadka, lkn Dhismaha Gudihiisa iyo banaankiisa oo wali ah Aag Dagaal ayeey maydad yaalaan sida ay ku waramayaan Wariyayaasha Hornafrik ee goobta ku sugan.
Wasiirka Amniga, Gud Gobalka, Gud Degmadda Hodan iyo Saraakiil Ciidan ayaa goobta ku sugan, waxaana sidoo kale laga maqlayay Gacanka Ciidanka isagoo Warbixino la siinayo Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Somalia oo isna Xafiiskiisa soo fariistay markii uu Weerarka billowday.
Kooxda Weerarka gaysatay oo aan la cayimin Tiradooda ayaa lagu qiyaasayaa illaa iyo 5, kuwaasoo qaar ka mida ay Xalay dileen Ciidanku, laakiin wali qaar kale ayaa nool oo Gudaha ka dagaalamaya. Waxayna isticmaalayaan Bam Gacmeedyo.
Ciidanka NISA ayaa iyaguna Dhismaha ay gabaadka ka dhiganayaan Kooxda Weerarka gaystay la bartilmaameedsanaya Hub Culus oo ay ka mid yihiin Gantaaladda Garabka laga rido.
Goor Dhaw Masuuliyiinta Dawladda ayaa la filayaa inay Warbaahinta la hadlaan, waxaadna si toos ah Shirka Jaraaid ee Masuuliyadda Dawladda ugala socon doontaan Barta aynu ku leenahay Facebook.com/hornafrikmedia oo Live aan uga tabin doono wixii Xaaladdan ku soo kordha.
Guji Lifaaqan si aad ula socoto Live wixii ku soo kordha Maqaayadda, Like na saar Page Lifaaqa Hoose si aad hadda kadib ugu xirnaato